Jeermiska Cilmi-baadhayaasha - Jean-Charles Foucrier :: DANNAHA CINWAANKA :: Muusikada, Sinema, Tiyaatarka, Buugaagta, Muujinta, Kalfadhiyada iyo waxyaabo kale oo badan. - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » SAYNISKA »Dagaalkii Cilmi-Beelaha - Jean-Charles Foucrier :: DANIISKA DUGSIGA :: Muusikada, Sinema, Tiyaatarka, Buugaagta, Muujinta, Kalfadhiyada iyo waxyaabo kale oo badan.
Jeermiska Cilmi-baadhayaasha - Jean-Charles Foucrier :: DANNAHA CINWAANKA :: Muusikada, Sinema, Tiyaatarka, Buugaagta, Muujinta, Kalfadhiyada iyo waxyaabo kale oo badan.
Tani waa buug kale oo wanaagsan oo Perrin nagu soo daabacayso Dagaalkii saynisyahanka qoraal ah Jean-Charles Foucrier. Jean-Charles Foucrier waa dhakhtar taariikhda casriga ah ee jaamacada Paris Sorbonne. Waa mid ka mid ah khabiirada Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo qoraaga qoraaga oo loo qoondeeyay qaraxyada bambada ee Faransiiska ee 1944.
Maaddaama uu shaqadiisa ugu dambeysay, wuxuu mar kale xiiso u qabaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka, ee ma aha dhinaca dhinaca dagaalka laakiin waxa uu ku jiraa qalabyada shaybaarrada iyo xafiisyada milatariga, isagoo maskaxda ku haya aqoonyahanno ka shaqeeya inay ka qayb qaataan dadaalka dagaalka .
Jahannamkii Dagaalkii IIaad ee Aduunka, sida adduunku uu ku shahiiday dagaal, cudur, niyadjab iyo cidhiidhi, wuxuu ina tusayaa sida ragga iyo dumarku u dagaalamayaan xalalka.
Ragga iyo dumarkan ayuu nala hadlayaa ma isticmaali karo hub iyo marar dhar ah labiska. Daraasaddooda waxaa lagu fuliyaa shaybaarada, oo ka fog xasuuqii dagaalka. Waa saynisyahanno, inta badan, si iskood ah go'aansaday in ay ka caawiyaan dagaalka.
Buuggan waxaa lagu dhisay cutubyo badan oo noo sheegaya dagaalkaas oo ay hogaaminayaan saynisyahannadu, annaga oo noo ogolaanaya in aan aragno dagaalkan Adduunka II ka soo jeeda xagal aad u kala duwan oo ku saabsan khilaafkan.
Markaa kadib waxaan aragnaa qaar ka mid ah saynisyahanada sirdoonka bini aadamka iyagoo ka shaqeynaya sidii loo yareyn lahaa dhibaatada bani-aadamka iyo daaweyn cusub iyo tallaal cusub. Taa bedelkeeda, aqoonyahanno kale waxay caddaadiyaan sirdoonka bini-aadanka iyagoo doonaya in ay si xun ula tacaalaan goobaha dagaalka ama xeryaha dhimashada iyaga oo samaynaya tijaabooyin cilmi-baariseed. Mid ka mid ah cutubka ayaa loo qaybiyaa epic of penicillin, mid kale tallaalada tifafka iyo raadinta duumada.
Buuggani wuxuu sidoo kale ka hadlayaa bilowga bamka atomiga, furitaanka Enigma laakiin sidoo kale dagaalka mawjadaha. Waxaa sidoo kale jira qayb gaar ah oo ku saabsan dhalashada kumbiyuutarrada. Waxaa lagu dhisayaa saynisyahanno, dumarkan iyo ragga, oo aan ku jirin sayniska. Tani waxay si cad u leedahay dano aan la dafiri karin maadaama ay noo ogolaanayso in aan soo ogaano magacyada iyo dadka aan ku jirin shaqooyinka taariikhiga ah. Mar kasta, qoraagu wuxuu ka taxaddaraa inuu sawiro sawiro ku muujiyo hab aad u xiiso leh.
Buugan, qoraagu wuxuu ina tusayaa muuqaal gaar ah oo xiiso leh oo ku saabsan dagaalkii labaad ee aduunka adoo na tusaya doorka ay ka ciyaaraan saynisyahanada khilaafkan. Waxaan si gaar ah u xusuusineynaa dib u dhigista Jarmalka meelaha qaar oo qayb ahaan sharaxaya guuldaradooda. Dhanka kale, waxaan aragnaa miisaanka cilmi-baarista ee dalalka kale ee si weyn ugu guulaystay guusha kama dambaysta ah.
Sidaas halkan, mar kale waxaan ku raaxaysanay buuggan yar ee Jean-Charles Foucrier. Wax badan ayaan ka bartay akhrinta iyo gaar ahaan waqti wanaagsan. Mar labaad, qaar ka mid ah buugaagta taariikhda, iyo tan kani waa tan middani, waxaa loo akhriyaa sida sheeko ahaan haddii mid ka mid ah uu yahay takhasus ama ma aha mawduuca ay ku hadlaan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.froggydelight.com/article-21965-La_guerre_des_scientifiques.html
Waxaa laga yaabaa in aanu nahay maalmo uun ka dib markii aan aragno dalool madow markii ugu horeysay - BGR
Xarunta Caalamiga ah ee Fogaanta Caalamiga ah waa qiiqa - BGR